Mpanamboatra hazavana sy mpamatsy herinaratra azo havaozina any Sina | YIJIASHUN
Jiro bisikileta azo havaozina azo havaozina
Model No .:IKIA-LED-A20
Freins Components:Sets tariby
Derailleur Set:Derearleur aoriana
Fototra fitaovana:Firaka manezioma
Fitaovana harona bisikileta:Wicker
Material amin'ny bisikileta bisikileta:Aluminium / firaka
Saddle Shell Fitaovana:Plastika
Fork Material:Firaka manezioma
Hery lehibe azo haverina Jiro bisikileta
Ity ambany ity dia ny Avo Rechargeable mainty. maro lokoBisikileta Jiro ekipa Ampidiro ao ny jiro taratra LED sy Dynamo ary jiro elektrika. Ny maodely sy ny habeny rehetra dia azon'ny orinasam-pamokarana omena anay. Modely bebe kokoa pls mitsidika ny tranonkalantsika hanamarina. Ary azonao atao ihany koa ny mandefa fanadihadiana aminay mba hahazoana sary sy vidiny bebe kokoa. Miandry ny hafatrao.
Vatana vy CP / ED ambonin'ny Vita Jiro eo aloha sy aoriana Toetoetra: Maharitra Vokatra maintso Fonosana matanjaka Fitaovana tsara Fisehoana tonga lafatra Mora ny miasa Fonosana: 1pc / boaty, 50pcs / ctn Fampahalalana tombony: 1. Fotoana fohy fandefasana 2. Tongasoa ireo kaomandy OEM sy ODM 3. Manana ny zon'ny fanafarana sy fanondranana mivantana
4. Manome mari-pahaizana momba ny fiaviana (toy ny, Form A, Form E, Form F)
Isan-taona isika dia hanatrika ny foibe SHANGHAI CYCLE amin'ny Mey. Azonao jerena ny rianayvokatra ch an'ny Bisikileta & Fiarovana amin'ny bisikileta, dia tsy izany ihany Jiro LED bisikileta ivelany tsara tarehyhaseho fa maro hafa koa ny maodely sy ny habeny azo voafidy. Toy ny bisikileta bisikileta bisikileta, bisikileta tongotra bisikileta, Etc, izay malaza amin'ny mpividy vahiny. Tongasoa eto hitsidika ny tranoheva misy anay.
Ity ambany ity ny vokatra mifandraika aminay, ary koa ny vokatra amidy amidy misy kalitao ambony sy ny fomba rehetra. Piera bisikileta ahitana Chainwheel & Crank, Paompy mitaingina bisikileta, fonosana / seza bisikileta, frein, bisikileta bisikileta, freewheel, famaky bisikileta, frame an'ny bisikileta, fotaka, lakile, lakolosy, harona, fantsona ary fantsona anatiny, fitaovana fanamboarana bisikileta, sns. Afaka mandefa anay ny sarinao koa ianao , ny fanekena ny logo anao dia azo ekena ihany koa. Raha liana amin'ny zavatra rehetra ianao, dia apetraho ny fanontanianao. Hahazo ny valiny haingana ianao.
Serivisy momba ny vokatra Voalohany, -Service, dia midika hoe Serivisy mialoha ny varotra:
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy bisikileta maivana azo havaozina Black Power Bike? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay mba hanampiana anao hamorona. Ny jiro elektrika avo lenta azo averina herinaratra azo antoka avokoa. Izahay dia China Factory Factory an'ny bateria azo havaozina herinaratra ambony bisikileta. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Teo aloha: Jiro jiro bisikileta LED
Manaraka: Fihetseham-po avo lenta miaraka amin'ny retainer
Bikes Horn miaraka amin'ny sary miaina ho an'ny bisikileta
Gel PU Mahazo aina MTB Bike Saddle
Sady fipetrahana amin'ny bisikileta lamaody milay
Hidina bisikileta vy azo ovaina
Black City Bike Peg Plastika tongotra
Bell Bell Bike Bell